Ifowuni ye-ASUS ROG isungulwe ngokusesikweni eSpain | I-Androidsis
Icandelo le-smartphone yokudlala yeyona nto inokukhula ngokukhawuleza. Iimodeli ezintsha zifika kuyo, zandisa ukhuphiswano kuyo. Enye yeefowuni ezaziwayo esizifumanayo kweli candelo yi-ASUS Rog Phone, zibonwe ngabaninzi njengezona zibalaseleyo kolu didi lwe-smartphone yokudlala. Ifowuni enye thaca ngokusesikweni ngenyanga yoMsintsi.
Kuninzi okukhoyo malunga nokuqaliswa kwayo eSpain. Kuba inkampani ayikhange ithethe nto ngayo, kwaye amanye amarhe acebisa ukuba yayizokwaziswa ngokusesikweni ngo-Okthobha, into engakhange yenzeke. Kodwa ekugqibeleni, Ifowuni ye-ASUS ROG sele isungulwe kwilizwe lethu ngokusemthethweni.
Umzuzu ababewulindile abaninzi ngoku usemthethweni. IpheI-orque sele inokwenzeka ukuthenga le fowuni ye-ASUS ROG eSpain. Nangona, njengoko kulindelwe, yifowuni engazukubiza kakhulu. Umphezulu woluhlu ofikelela kwicandelo lokudlala le-smartphone, njengenye yezona ndlela zibalaseleyo.
Zombini ezobuchwephesha kunye noyilo, ngaphezulu kokuhlangabezana noko sikulindeleyo kwi-smartphone yangoku yokudlala. Ngokumalunga nexabiso layo, abo banomdla kule fowuni ye-ASUS ROG Kuya kufuneka bahlawule i-euro ezingama-899 ngayo. Ayisiyoyona fowuni ibiza ixabiso eliphantsi kwintengiso. Nangona ngokuqinisekileyo kukho abasebenzisi abanomdla kuyo.
Uyakwazi ukuthenga le fowuni ye-ASUS ROG, zombini kwiwebhusayithi esemthethweni yohlobo kunye nakubasasazi abasemthethweni. Ke ngekhe ubenengxaki ekufumaneni ifowuni. Kuza kunye nokwazisa ukwazisa. Ukusukela eshumini sokuqala ukuyithenga fumana isigqebhezana see-euro ezingama-100 ukuthenga izincedisi kwifowuni.
Siza kubona ukuba ukuthengisa kwale fowuni kuvela njani kwintengiso yaseSpain. Kuba sisixhobo esisemgangathweni, mhlawumbi okona kulungileyo okwangoku kweli candelo. Ke siya kujonga indlela eyamkelwa ngayo Ifowuni ye-ASUS ROG eSpain.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ifowuni ye-ASUS ROG isungulwe ngokusesikweni eSpain
Le yimidlalo kunye nezicelo ezichongiweyo kwiGoogle Play Best of 2018 Awards